डोल्पाको माझफालमा हिमपात !
२०७८ पौष १७ शनिबार
डोल्पाको माझफाल गाउँमा भएको भारी हिमपात । हिउँ परेपछि हिउँदे बाली राम्रो हुने भएकाले किसान खुशी छन् भने हिमपातका कारण यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । तस्बिरः हेमन्त केसी, रासस
काठमाडौंमा फोहोरको डंगुर (फोटोफिचर)
काठमाडौँ । काठमाडौंका मुख्य सहरमा बेलैमा फोहोर नउठाउँदा दुर्गन्ध फैलिएको छ । सहरका चोकमा फोहोरका डंगुर देखिएका छन् । तस्वीरमा हेरौ फोहोरको डङ्गुर:
लुम्बिनीमा मोदी (फोटो फिचर)
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीमा आएका छन् । मोदीले करिब ६ घण्टा लुम्बिनीमा बिताउने बताइएको छ । करिब ११ बजे लुम्बिनीमा हेलिकप्टरबाट आएका मोदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वागत गरेका
काठमाडौं महानगरको मतगणना (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ । बिहीबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत भएको काठमाडौं महानगरको मतगणना भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा गृहमाा भइरहेको मतगणनाअनुसार अहिलेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता लिएका छन् । बालेनले ११९
बाबुराम भट्टराईलाई फोटो खिच्न दिने मतदान अधिकृतलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई मतदान केन्द्र भित्र फोटो खिच्न दिने मतदान अधिकृत प्रदीपकुमार शर्मा रुपाखेतीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । भट्टराईले मतसंकेत
जितपुरसिमरा उपमहानगरको मेयरमा माओवादीका राजन पौडेल विजयी
मंगल ग्रहको धुलोले बढ्यो नासाको इनसाइट ल्यान्डरको समस्या
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी